Faritra Analanjirofo : ampiharana ny voly vary Papriz | NewsMada
Faritra Analanjirofo : ampiharana ny voly vary Papriz
Ezahina hatsaraina ny voly vary ny any amin’ny faritra Analanjirofo. Hoentina manatanteraka izany ny fampiharana ny voly Papriz, teknika avy amin-dry zareo Japoney, izay mampitombo voka-bary.
Toekarena miankina betsaka amin’ny fambolena ny eto Madagasikara, ka mahasarika ny fanjakana japoney manampy betsaka io sehatra io. Tetikasa iray tohanan’ny Japoney amin’izany ny voly vary Papriz, izay efa eo amin’ny sehatra fanapariahana azy ankehitriny, aorian’ny faritra Vakinankaratra, izay nahitana fitomboany hatramin’ny 100 % ny vokatra ho an’izay nanao Papriz. Anisan’ny faritra mampihatra izany koa izao Analanjirofo, nidinan’ny teknisianina japoney, nampiofana ireo mpamboly sy nitondra masomboly volena.
Efa nisy andrana natao tany Analanjirofo, nahitam-pahombiazana, ary afa-po tamin’izany ireo tantsaha. Manampy indray izao ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana, manentana ny mpamboly any an-toerana hiala amin’ny fomba mahazatra teo aloha, hiditra amin’ity tetikasa Papriz ity.
Ankoatra ny lafiny teknika, napetraka ny fotodrafitrasa sy fitaovana any an-toerana ahafahana manao izany voly vary izany. Misy foibe iray misahana ny fitantanana sy fanofanana ny mpamboly, manomana teknisianina manampy ireo namany any amin’ireo kaominina ao anatin’ny faritra. Foibe fanofanana napetraka avy amin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta.
Hatramin’ny taona 2020, hampiharana ny tetikasa Papriz II ny faritra 11 eto Madagasikara. Amin’ny faritra afovoan-tany : Alaotra Mangoro, Itasy, Bongolava, Vakinankaratra, Analamanga. Manaraka izay, kendrena ny hampitombo ny vokatra any amin’ny faritra Amoron’i Mania, Atsinanana, Analanjirofo, Boeny, Betsiboka ary Menabe.
Faharoa ny Malagasy amin’ny fanjifana vary aorian’ny Birmania, araka ny tatitra navoakan’ny FAO. Ahitana tanimbary mirefy 1,2 tapitrisa ha eto an-toerana, 60 % amin’ny karazam-boly rehetra. Ny olana anefa, tsy ampy ny vokatra na midadasika aza ny tany. Miankina betsaka amin’ny fanafarana vary avy any ivelany izao ny fanjifana eto, izay efa mahatratra 240.000 t ankehitriny.